के ओली मध्यावधि चुनाव तर्फ बढेका हुन् ?
हाम्रोखबर शनिबार, कात्तिक १५ २०७७
त्यतिबेला उनीसँग तीन वटा विकल्प रहनेछन । पहिलो, आफ्नो गल्तीलाई सुधार्दै अन्य नेताहरुसँग ‘सरेन्डर’ गर्ने, दोस्रो, पार्टी फुटाएर एक्लिने र तेस्रो मध्यावधि चुनावमा जाने ।
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवादले उग्ररुप लिएको धेरै समय भइसकेको छ । यस बिच धेरै वार्ता छलफल भएपनि त्यसले समाधान समाधानको साटो विवादलाई उग्र बनाउँदै लग्यो । हुँदाहुँदै नेताहरु बीच बोलचाल नै बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले गरेका निर्णयलाई टेरपुच्छर नलगाएका मात्र होइन आफूखुशी निर्णय गर्दै हिडेपछि समस्या बल्झिएको कसैबाट छिपेको छैन । ओलीको रवैयाबाट थाहा हुन्छ– उनी पार्टीका सचिवालय, स्थायी समितिदेखि केन्द्रीय समितिसम्मै अल्पमतमा छन् । तथापि उनी हार मान्ने पक्षमा छैनन् ।
ओली आफ्नै पाटीभित्र पनि अलोकप्रिय बन्दै गएका छन । कोरोना महामारीका बेला राम्रोसँग काम गर्न नसक्नु, छिमेकी मुलुकको सामान्य खुफिया एजेन्सीका प्रमुखसँग राताराता भेट्नु, योग्यता नभएका मान्छेलाई नियुत्ती गर्नु, पार्टीले गरेका सर्वमत निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्नु र सामान्य सिद्धान्तमा पनि उनी टिक्न नसक्नु उनको अलोप्रियताको कडी हो । पार्टी निर्णय मातहत रहेर सरकार सञ्चालन गर्नु पर्नेमा उनले त्यसो गरेनन् । आफै ब्रम्हज्ञानी र आफू एउटै सिंगो नेकपा भए जस्तो हुकुमी शैली ओलीमा बारम्वार देखिंदै आएको देखिन्छ । स्वभाविक रुपमा अन्य नेताहरु उनको व्यवहारले चिढीए । उनको कार्यशैली र प्रवृतिका कारण उनको राजिनामा समेत मागियो । तर ओली सच्चिनुको सट्टा आफूखुशी गर्दै हिड्न थाले । सचिवालय, स्थायी समिति वा विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले दिएको सुझावलाई उनले वास्ता गरेनन् । बरु उनी पार्टीभित्र अन्तरविरोध बढाउने, नेताहरुलाई विभिन्न प्रलोभन देखाउने र आफूतिर तान्ने कोशिसमा रहेका छन ।
पछिल्ला दिन उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइने हल्ला राजनीति बृतमा व्यापक बनेको छ । विशेषगरी भारतको ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलले ओलीलाई भेटपछि अविश्वास प्रस्तावको विषय आगोको भुङ्ग्रो झै बनेको छ । नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नेकपाको असन्तुष्ट खेमाले प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरको हल्ला सर्वत्र फिजाइँएको छ । सत्य के हो त्यो त सतहमा आएको छैन तर कतिपयले यस्तो हल्ला स्वयं ओली पक्षधरले फिँजाएको आरोप समेत लगाएका छन ।
तर एउटा सत्य चाहिं के हो भने कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रकरण, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बढेको दूरी र माधवकुमार नेपालसँग भएको करिब ४ घण्टाको छलफलले ओलीका लागि आगामी दिन चाहि सजिलो छैन ।
त्यतिबेला उनीसँग तीन वटा विकल्प रहनेछन । पहिलो, आफ्नो गल्तीलाई सुधार्दै अन्य नेताहरुसँग ‘सरेन्डर’ गर्ने, दोस्रो, पार्टी फुटाएर एक्लिने र तेस्रो मध्यावधि चुनावमा जाने । यीमध्ये उनका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको मध्यावधि चुनाव हुन सक्छ । किनभने उनी आफ्नो गल्ती देख्दैनन् त्यसैले उनले पार्टीका अन्य नेताहरुसँग ‘सरेन्डर’ गर्ने कुरै आउँदैन । त्यस्तै यतिबेला पार्टी फुटाए त्यसको भविष्य र निरन्तरता त्यतिकै जटिल छ । यसकारण उनका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको मध्यावधि चुनावमा जानु नै हो ।
अब प्रश्न उठ्न सक्छ, के देशले मध्यावधि चुनाव धान्न सक्ला ? तर ओलीलाई यो कुराले कुनै प्रभाव पार्ने छैन । उनी आफू र आफ्ना बाहेक देशलाई सर्वोपरि ठान्ने नेता नै होइनन् । यो कुराको प्रमाण त उनको कार्यशैलीले नै देखाइसकेको छ ।